HomeWararka SomaliyaGalmudugMaxay tahay Tilaabada xigta ee Ahlu-Sunna kadib kabixitaankii Guriceel
Madaxa siyaasadda ee xoogagga Ahlu Sunna Waljameeca ee dhawaan ka dagaallamay Galmudug ayay BBC-da weydiisay tallaabada xigta ee ay qaadi doonaan.
Cabdisalaan Aadan Xuseen, ayaa sheegay in qorshahooda uu ahaan doono sidii uu horay u ahaan jiray.
“Ahlu Sunna Waljameeca taladeedu way iska caddahay, horay ayayna u bayaaniyeen culimada iyo hoggaankuba,” ayuu yiri.
Maxay tahay sababta ay Ahlu Sunna uga baxeen Guriceel?
Intee dhan tahay awoodda Ahlu-suna
Markii ay dowladda Soomaaliya ay meesha ka saartay Ahlu Sunna sanadkii hore ayaa waxa gabi ahaanba burburay awoodoodii ciidan, ugu yaraan inta markaas muuqan kartay.
Ciidamadii Ahlu Sunna ayaa ku biiray kuwa dowladda federalka ee Soomaaliya islamarkaana madaxdii Ahlu-sunna ayaa dalka dibadiisa aaday.
Wasiirkii hore ee amniga Galmudug Axmed Macallin Fiqi ayaa sheegay in ciidamada Ahlu sunna ay u badan yihiin dad mutadhawiciin ah.
“Horta Ahlu Suna waa dadka manhajka aaminsan ee ma jiro ciidan toos ah,” ayu yiri Mr Fiqi.
Waxaa uu intaa ku daray in ciidanka imika ka dagaalamaya Guriceel ay ku jiraan ciidamo ka soo goostay dowladda Soomaaliya, balse asalkooda ka yimid Ahlu-Sunna.
“Ciidankan Guriceel ka dagaalamaya waxaa ku jira qiyaastii 250 ciidanka dowladda ka tirsan laakiin asalkii hore Ahlu-sunna ka yimid, saraakiil qiyaastii ilaa 42 sargaal ayaa ku jirta oo tabashooyiin ka qaba maamulka Galmudug, “ayuu intaa ku daray.
Sawiro: Madaxweyne Qoor Qoor oo Booqday Ciidanka Galmudug iyo Dowlada ee Ahlu-suna ka saaray Guriceel